KEISUU DRONE kit - KeisuuGiken
KEISUU DRONE Kit
စျေးနှုန်း ၁၂၃,၀၀၀ ယန်း ~ အခွန်မပါဝင်ပါ။
အခွန်မပါဝင်ဘဲ အခြေခံဖွဲ့စည်းပုံစျေးနှုန်း ယန်း ၁၂၃,၀၀၀
ဒရုန်းဘောင် + မော်တာ + ECS
ပျံသန်းမှု ထိန်းချုပ်ကိရိယာ + ပါဝါထောက်ပံ့မှု မော်ဂျူး + GPS
Telemetry Ground Control ဘက်မှ USB dongle
5V မိုက်ခရိုကွန်ပျူတာအတွက် Telemetry ပျံသန်းမှု ထိန်းချုပ်ရေးဘက်
8ch RC လက်ခံကိရိယာ (S.BUS သဟဇာတ၊ Futaba လက်ခံကိရိယာနှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သည်)
OpenTX နှင့် လိုက်ဖက်သော RC အသံလွှင့်စက်
OpenTX ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံဖိုင်များကို သိမ်းဆည်းရန်အတွက် သိုလှောင်မှု
ရေဒီယို 2600mAh ဘက်ထရီ
ဒရုန်းအတွက် LiPo ဘက်ထရီ 3000mAh 11.1V
ဒရုန်းများအတွက် LiPo ဘက်ထရီအားသွင်းကိရိယာ
စီးပွားဖြစ် ဒရုန်းကဲ့သို့ ရေဒီယိုဖြင့် လည်ပတ်နိုင်သည်။ အလိုအလျောက် ပျံသန်းစဉ်အတွင်း အနှောင့်အယှက်ပေးသည့် လုပ်ဆောင်ချက်များလည်း ဖြစ်ပေါ်နိုင်သောကြောင့် ဘေးကင်းမှုကို အာမခံနိုင်ပါသည်။ ရေဒီယို၏ ဆင်းသက်ခလုတ်ကို အဖွင့်/ပိတ်လိုက်ရုံဖြင့်၊ သင်သည်ပျံသန်းမှုထိန်းကိရိယာဖြင့် ဘေးကင်းစွာ အလိုအလျောက် ဆင်းသက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
2.	Open source ပရောဂျက်များ (Raspberry Pi၊ ROS၊ Pixhawk၊ Ardupilot) ကို အသုံးချထားသည်။
အလိုအလျောက် ပျံသန်းမှုကို ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် Raspberry Pi နှင့် ROS ကို အသုံးပြုကာ အခြေခံ ဒရုန်းပျံသန်းမှု ထိန်းချုပ်ခြင်းအတွက် Pixhawk နှင့် Ardu Pilot ကို အသုံးပြုပါ။ ၎င်းတို့ကို ဒရုန်းတီထွင်မှုနယ်ပယ်တွင် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုနေကြသောကြောင့် ၎င်းတို့ကိုကျွမ်းကျင်ပါက၊ သင်သည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ မည်သည့်နေရာတွင်မဆို ဒရုန်းအင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးအဖြစ် တက်ကြွစွာပါဝင်သရုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။
3.	QGroundControl ကို ပံ့ပိုးပေးသည်။
Linux Foundationမှ စီမံခန့်ခွဲသည့် Open source drone operation app – QGroundControl ကို အသုံးပြု၍ သင်သည် အလိုအလျောက် ပျံသန်းမှု ကန့်သတ်ချက်များကို သတ်မှတ်နိုင်သည်။ ပျံသန်းစဉ်အတွင်း မှတ်ထားသော Register point များသို့ အလိုအလျောက် ပျံသန်းနိုင်သည်။ QGroundControl သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ဒရုန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုက်များတွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုနေသည့် open source software ဖြစ်သည်။
4.	MAVLink ကို ပံ့ပိုးပေးသည်။
MAVLink သည် ဒရုန်းထိန်းချုပ်မှုတွင် အသုံးများသော de facto standard communication protocol ဖြစ်သည်။ တရားဝင် ROS ပက်ကေ့ဂျ်ကို ရနိုင်သည်၊ ၎င်းသည် အမြန်နှုန်း / gyro / GPS နှင့် အလိုအလျောက် ပျံသန်းမှုအတွက် လှုပ်ရှားမှုလမ်းကြောင်း အမိန့်ပေးသည့် ဂီယာကဲ့သို့သော အာရုံခံကိရိယာဒေတာလက်ခံမှုကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ထို့ကြောင့်၊ ပထမဆုံး အကြိမ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရပျံသန်းရေး ပရိုဂရမ်များကို စမ်းသုံးနေသည့် အစပြုသုံးစွဲသူများပင်လျှင် ထိထိရောက်ရောက် လေ့လာနိုင်ပါသည်။
5.	ကင်မရာပါသော အဆောက်အဦးအတွင်း ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရပျံသန်းနိုင်သည့် ယာဥ် (‌ရွေးချယ်နိုင်သည့် အခွင့်အ‌ရေး)
ရွေးချယ်နိုင်သော အစိတ်အပိုင်းများကို ထည့်ပါက၊ ကင်မရာ၏ ပုံရိပ်ကို လုပ်ဆောင်ရုံဖြင့် အဆောက်အဦးတွင်း၌ အလိုအလျောက် ပျံသန်းနိုင်သည်။ GPS ၏ လက်လှမ်းမမီသော အဆောက်အဦးများတွင် အလိုအလျောက် ပျံသန်းမှု သုတေသနအတွက် ၎င်းကို အသုံးပြုနိုင်သည်။
အရွယ်အစား အလျား ၃၈၃ မီလီမီတာ၊ အနံ ၃၈၅ မီလီမီတာ၊ အမြင့် ၂၄၀ မီလီမီတာ
ကိုယ်အလေးချိန် ၇၈၂ ဂရမ် (ဘက်ထရီမပါဝင်)
အများဆုံးပျံသန်းချိန် မိနစ် ၂၀ ခန့်
လည်ပတ်မှုကန့်သတ်ချက်အမြင့် ၁၅၀မီတာ လေကြောင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဥ်းအကွာအဝေးအထိ စမ်းသပ်ခဲ့သည်။
အများဆုံးသယ်ဆောင်နိုင်သောဝန်အလေးချိန် ၁.၈ ကီလိုဂရမ် (ဘက်ထရီ အပါအဝင်)
လည်ပတ်မှုအကြိမ်ရေ 2.400-2.48 GHz
GNSS Ublox Neo-M8N IST8310 သံလိုက်အိမ်မြှောင်
ရွေးချယ်နိုင်သော အစိတ်အပိုင်းများ (အခွန်မပါသောစျေးနှုန်း)
အတွင်းပိုင်းပျံသန်းမှုအခြေအနေထိန်းချုပ်ခြင်းအတွက် Optical flow sensor ¥20,000
KEISUU ထိန်းချုပ်ကိရိယာ အလိုအလျောက် လည်ပတ်ထိန်းချုပ်ရေး မိုက်ခရိုကွန်ပျူတာ ¥25,000
ဒရုန်းထိန်းချုပ်မှုအတွက် OS ရုပ်ပုံကတ် ¥10,000
အလိုအလျောက် ပျံသန်းမှုအတွက် ရုပ်ပုံလုပ်ဆောင်ခြင်း ကင်မရာ ¥15,000
ထွက်ခွာ/ဆိုက်ရောက် နေရာ ¥5,000